Dmitry Anatolyevich Medvedev (Ruush: Дми́трий Анато́льевич Медве́дев; wuxuu dhashay 14-kii Sebtember 1965) waa siyaasi Ruush ah oo soo noqday Guddoomiye Ku-xigeenka Golaha Amniga ee Ruushka tan iyo 2020. Medvedev wuxuu madaxweyne ka soo noqday Ruushka intii u dhaxeysay 2008 ilaa 2012 iyo Ra'iisul Wasaaraha Vladimir Putin intii u dhexeysay 2012 ilaa 2020.
File:Dmitry Medvedev 2016.jpg
Medvedev waxaa loo doortay Madaxweynaha doorashadii 2008. Waxaa loo tixgeliyey inuu yahay mid ka furfuran madaxweynihii isaga ka horreeyey, Vladimir Putin, oo sidoo kale loo magacaabay Raiisul Wasaare intii uu madaxweynaha ahaa Medvedev. Ajandaha ugu sareeya ee Medvedev ee madaxweyne wuxuu ahaa barnaamij casriyeyn balaaran, oo ujeedkiisu yahay casriyeynta dhaqaalaha Ruushka iyo bulshada, iyo yareynta ku tiirsanaanta dalka ee saliida iyo gaaska. Intii uu xilka hayay Medvedev, heshiiskii yareynta hubka Nukliyeerka ee 'New START' waxaa wada saxiixay Ruushka iyo Mareykanka, Ruushka wuxuu ku soo baxay guul dagaalkii Russo-Georgia, wuxuuna ka soo kabtay Dhibaatadii Weynayd. Medvedev wuxuu kaloo bilaabay olole ka dhan ah musuqmaasuqa, in kasta oo isaga laftiisa lagu eedeeyay musuqmaasuq.
Hal mar ayuu xafiiska qabtay waxaana ku guulaystay madaxweynihii hore Vladimir Putin sanadkii 2012. Medvedev ayaa markaa Putin u magacaabay raysal wasaare. Wuxuu iska casilay xilka Ra'iisal Wasaaraha isaga iyo dowladda inteeda kale 15 Janaayo 2020 si loogu oggolaado Madaxweyne Putin inuu sameeyo isbaddallo ballaaran oo dastuuri ah; waxaa badalay Mikhail Mishustin 16 Janaayo 2020. Isla maalintaas Putin wuxuu Medvedev u magacaabay xafiiska cusub ee gudoomiye ku xigeenka Golaha Amniga.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dmitry_Medvedev&oldid=206625"
Last edited on 22 Oktoobar 2020, at 15:34
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 22 Oktoobar 2020, marka ee eheed 15:34.